LUNGISA AMAWINDI WEDIVAYISI YE-BOOT ENGAFINYELELEKI YE-BSOD, BUG CHECK 0X7B - AMANANI
Ngemuva kwakamuva kweWindows 10 Thuthukisa, Ukuthola idivaysi ebhuthini engafinyeleleki i-BSOD iphutha ekuqaleni? Ngenxa yaleli Phutha Lesikrini Esiluhlaza INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE I-Windows Iqala Kabusha futhi yehluleke ukuqala ngokujwayelekile? Ngokuvamile, leli phutha alitholakali idivayisi ye-boot Hlola isiphazamisi 0x0000007B ikhombisa ukuthi i-OS ilahlekelwe ukufinyelela kwedatha yohlelo noma ukwahlukaniswa kwama-boot ngesikhathi sokuqala. Noma i-System ayikwazi ukufunda ukwahlukanisa kwe-Windows ku-hard drive it boots from.
Okuqukethwe umbukiso 1 Idivayisi ye-boot engafinyeleleki Windows 10 1.1 Lungisa izingxenye ze-Boot 1.2 Qalisa kumodi ephephile ngokuxhumana nabantu 1.3 Skena Futhi Hlola Idiski Elinamaphutha 1.4 Qalisa umyalo we-SFC ne-DISM 1.5 Khubaza ukuqala okusheshayo 1.6 Khipha noma yiluphi uhlelo lokusebenza olusanda kufakwa
Kunezizathu ezahlukahlukene ezingadala lokhu idivaysi ebhuthini engafinyeleleki i-BSOD Iphutha ku-Windows 10. Kungaba ukwehluleka kwe-disk drive, izintambo zedatha ezixhumeke ngokukhululekile ngaphakathi kwebhodi lesistimu ne-HDD. Amafayela Aphindiwe Kumahlukanisi weBoot noma uma iBootmgr ilahlekile ungahle uhlangabezane nephutha ledivayisi ye-boot engenakufinyeleleka Windows 10.
Idivayisi ye-boot engafinyeleleki Windows 10
Uma kungokokuqala ngqa ukuhlangabezana naleli phutha ukuqala kabusha okulula kungasiza.
Futhi Susa onke amadivayisi angaphandle (njenge-HDD yangaphandle, iphrinta, isithwebuli njll.) Khipha ikhibhodi negundane bese uqala ikhompyutha ngokujwayelekile ukuze uqiniseke ukuthi noma iyiphi idivayisi yangaphandle ayibangeli inkinga. Uma uqaphela ngemuva kokukhipha amadivayisi wangaphandle amawindi aqale ngokujwayelekile bese uthola idivayisi enenkinga bese ubheka okufanayo kwenye ikhompyutha ukuthola izinkinga zokuhambisana.
ithebhu yokusakaza awekho amadivayisi atholakele
Uma usebenzisa i-2 HDD kusistimu yakho ngincoma ukuthi ususe ngokuphelele idrayivu yesibili.
Ezinye Izikhathi zilahlekelwa ukuxhumeka phakathi kwebhodi le-HDD nelesistimu nakho kubangela leli phutha le-BSOD. Uma usebenzisa i-Desktop PC, vula ikesi bese ubheka ikhebula le-SATA elixhunywe kahle phakathi kwe-HDD ne-System board.
Vele Qala kabusha iSistimu yakho bese ufaka ifayela le- I-BIOS ngokucindezela Ukhiye we-F2 / del kaningi ekuqaleni. I-F2 yiyona ezenzakalelayo yohlelo olusebenza kakhulu, kepha uma ingakusebenzeli esikrinini se-POST ubhekisise ukuze ubone ukuthi yimuphi ukhiye osethwe ukufaka i-BIOS bese uqala kabusha futhi usebenzise ukhiye ofanele ukungena ku-BIOS .
Lapha yiya main -> Imodi ye-SATA Futhi Lapha khetha i-AHCI Mode esikhundleni se-IDE ohlwini. Phinda uhambise ku-boot Tab bese ushintsha i-Frist Boot njenge-HDD. Cindezela ku-F10 Ukugcina izinguquko ekusethweni kwe-BIOS naku-Restart windows Hlola kuqalwe ngokujwayelekile.
i-itunes ayitholi i-iphone windows 10
Uma i-boot drive yakho ingekho ku-BIOS yakho, kungenzeka yehlulekile. Zama enye idrayivu endaweni yayo ukuze uhlole ikhebuli / amandla / isixhumi. Uma enye idrayivu ibonakala, kungenzeka ukuthi ukwehluleka kokushayela. Uma ingaveli, zama i-IDE ehlukile noma imbobo ye-SATA, ikhebuli nesixhumi samandla.
Finyelela ifayela le- Windows 10 Izinketho Zokuqalisa Ezithuthukile Bese uchofoza ku-Startup Repair Ukuhlola nokulungisa uma kukhona noma yiziphi izilungiselelo ezilahlekile / ezikhohlakele zokumiswa kwebhuthi noma izilungiselelo ze-Corrupt registry ezibangela inkinga.
Landela lezi zinto, Uma ungangena kwi-PC yakho okungenani isikrini sokungena ngemvume:
Ekuqaleni, Cindezela bese ubamba iShift kusuka kukhibhodi bese uchofoza inkinobho yokuqalisa kabusha.
Ngemuva kwalokho, iya ku-Troubleshoot> Izinketho ezithuthukile> Ukulungisa ukuqala.
Uma ungakwazi ukufinyelela kwi-PC yakho -
Faka iBootable Windows Media ku-USB bese uqala kabusha i-PC yakho (Uma ungenayo, Funda ukuthi ungayenza kanjani Dala iMedia / USB eboshiwe )
Cindezela noma imuphi ukhiye ukufinyelela iwindi lokusetha.
Qhubeka ukhethe Lungisa ikhompyutha yakho.
Manje, Iya ku Xazulula inkinga> Izinketho ezithuthukile> ukulungiswa kokuqalisa
Izinketho ze-Boot ezithuthukisiwe kumawindi 10
Lungisa izingxenye ze-Boot
Ngemuva kokulungiswa kokuqalisa amawindi aqala ngokujwayelekile ngaphandle kwephutha le-BSOD. Uma amawindows ehluleka ukuqala futhi kusuka kokukhethwa kukho okuthuthukile chofoza ku-command Prompt Futhi wenze umyalo ngezansi ku-
Njengoba kuxoxwe ngaphambi kwesizathu esiyinhloko saleli phutha le-BSOD yedivayisi engafinyeleleki ukuthi, i-OS ilahlekelwe ukufinyelela kwedatha yohlelo noma ukwahlukaniswa kwama-boot ngesikhathi sokuqala. Kungenzeka ukuthi ifayela le-master boot record (MBR), ifayela le-Boot configuration data (BCD) lilahlekile noma lonakele okungenzeka ukuthi lidala inkinga.Futhi ukusebenzisa umyalo ngezansi kuyasiza ukubhekana nale nkinga.
Lungisa ifayela le-master boot record (MBR) nedatha yokumisa i-Boot (BCD)
Qalisa kumodi ephephile ngokuxhumana nabantu
Isikhathi esiningi Ifayela lokulungisa i-master boot boot (MBR) ne-Boot configuration data (BCD) Lungisa iphutha le-BSOD ne-Windows iqala ngokujwayelekile. Kepha uma usathola i-BSOD efanayo Ngemuva kwalokho kungahle kube nokonakele, umshayeli wesibonisi esiphelelwe yisikhathi noma ongahambelani odala iphutha le-inaccessible_boot_device windows 10 BSOD. Futhi Ezinye izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni, amafayela wesistimu okhohlakele, amaphutha wedrayivu yedrayivu nawo abangela leli phutha le-Blue screen ku-windows 10, 8.1 no-7. Lokho okudala ukuthi uqale ebhuthini kwimodi ephephile, Lapho amawindows aqala khona ngezidingo ezisezingeni eliphansi lohlelo futhi akuvumela ukuthi wenze izinyathelo zokuxazulula inkinga. Funda ukuthi ungakwenza kanjani qalisa kumodi ephephile kumawindi 10, 8.1 .
imenyu yokuqala iphutha enamaphutha ayisebenzi
Skena Futhi Hlola Idiski Elinamaphutha
Njengoba kuxoxwe ngaphambi kokwehluleka kwe-disk drive futhi kubangela ukufinyeleleka kwe-boot device, noma i-OS ilahlekelwe ukufinyelela kwedatha yohlelo noma ukwahlukaniswa kwama-boot ngesikhathi sokuqala. Ukuqalisa umyalo we-CHKDKS kusiza kakhulu okuyi hlola idiski yediski yamaphutha bese uwalungisa uma kutholakala.
Lapho amawindi aqala ngemodi ephephile umyalo ovulekile njengomphathi, Bese ype umyalo chkdsk c: / r / f bese ushaya ukhiye wokungena. Bese ucindezela Y ukuqinisekisa ukusebenzisa isheke lediski ekuqaleni kabusha okulandelayo, Vala umyalo we-oda bese uqala kabusha amawindi. linda kuze kube ngu-100% uqedele inqubo yokuskena ngemuva kwalokho qala kabusha amawindi bese uhlola uhlelo luqala ngokujwayelekile.
Qalisa umyalo we-SFC ne-DISM
Futhi Qalisa ifayela le- Amafayili wesistimu wokuhlola Ukusetshenziswa eskena bese ibuyisa uma kukhona ifayili lesistimu elonakele, elilahlekile elibangela inkinga. Ukuze wenze lokhu open command Prompt njengomlawuli , Bese uthayipha sfc / scannow bese ushaya ukhiye wokungena. Lokhu kuzoqala ukuskena inqubo yokulahleka kwamafayela wesistimu alahlekile. Uma kutholakala noma yimuphi umonakalo, isistimu elahlekile ifaka insiza ye-SFC ibabuyisele ngokuzenzakalelayo kusuka kufolda ecindezelwe etholakala ku- % WinDir% System32 dllcache . Linda kuze kube ngu-100% uqedele inqubo yokuskena, Ngemuva kwalokho qala kabusha amawindi bese uhlola ukuthi alikho elinye ibhulogi elingenakufinyeleleka le-boot device.
Uma uhlelo lokuhlola ukuskena kwefayela lohlelo luthola amafayela okhohlakele weWindows kepha lungakwazanga ukulungisa amanye awo, lokho kudala ukuthi usebenzise Ithuluzi le-DISM elungisa isithombe sesistimu futhi ivumele i-sfc ukuthi yenze umsebenzi wayo.
Khubaza ukuqala okusheshayo
Lapho amawindi aqala kwimodi ephephile qala ukuvula ipaneli yokulawula -> Izinketho Zamandla -> Khetha ukuthi izinkinobho zamandla zenzani -> Shintsha izilungiselelo ezingatholakali njengamanje -> futhi ungahloli Vula Ukuqalisa Okusheshayo ukukhubaza izinketho zokuqalisa ezisheshayo. Yikuphi ukulungisa okuningi Windows 10 Izinkinga zokuqalisa zifaka iphutha le-BSOD, iphutha lesikrini esimnyama njll. Funda siyini isici sokuqalisa esisheshayo nokuthi kungani sidinga ukukhubaza lesi sici .
Khipha noma yiluphi uhlelo lokusebenza olusanda kufakwa
Uma iphutha liqale ukuvela, ngemuva nje kokufaka uhlelo noma ukufaka umshayeli omusha. Ngemuva kwalokho kunethuba lokuthi lolu hlelo olusha lungadala iphutha. Lokho kubangela ukuthi ususe uhlelo lokusebenza ku-Iphaneli yokulawula> Zonke izinto zePhaneli Yokulawula> Izinhlelo nezinhlelo. Manje khetha uhlelo lokusebenza olusanda kufakwa bese uqhafaza ukukhipha.
dism / online / cleanup-image / restorehealth yehlulekile
Kwesinye isikhathi Faka kabusha umshayeli wedivayisi bese usebenzisa i- Ithuluzi Lokuhlola Imemori ukubheka amaphutha enkumbulo Futhi kube yisixazululo esisebenzayo sokubhekana ne-BSOD ehlukile Windows 10 I-PC.
Lezi ngezinye zezixazululo eziphumelelayo zokuzilungisa idivaysi ebhuthini engafinyeleleki i-BSOD iphutha elisebenza ku-Windows 10, 8.1 no-7. Futhi ngiyaqiniseka ukuthi ukusebenzisa lezi zixazululo kulungisa iphutha le-BSOD futhi i-PC yakho iqala ngokujwayelekile. Noma kunjalo, unanoma yimuphi umbuzo, isiphakamiso mayelana nalokhu okuthunyelwe zizwe ukhululekile ukuxoxa ngamazwana angezansi. Futhi, Funda 7 izixazululo zokusebenza ukulungisa windows 10 slow boot noma inkinga yokuqalisa 2018
windows 10 19h1 usuku lokukhishwa
amandla wesiginali ye-wifi ephansi kakhulu windows 10
i-adaptha yenethiwekhi ye-laptop iqhubeka nokunqamula
windows 10 thuthukisa ukulungisa izinguquko ezenziwe kwikhompyutha yakho
Iphutha le-iTunes 0xe80000a windows 10
susa kusebenze windows watermark unomphela u-2018